Ukukhishwa ku-Netflix, HBO ne-Disney + ngoMeyi 2020 | Izindaba zamagajethi
Inyanga kaMay isifikile futhi kubonakala sengathi izoqhubeka nokusigcina kusofa isikhathi eside. Ngenkathi ukwahlukaniswa kanye nezinye izinyathelo ezichaza ukungashiyi indlu kunciphisa usuku lwethu nosuku, sisebenzisa isisho ukuthi lapho kuvalwa umnyango, kuvuleka iwindi. Ngakho-ke, kuba yithuba eliyingqayizivele lokuqhubeka nokubuka uchungechunge lwethu oluyintandokazi nokuya kuwo wonke ama-premieres. Sizothola ukuthi zonke izindaba ezivela kuNetflix, i-HBO ne-Disney + ziyini ngale nyanga kaMeyi 2020, Sikulethela izaba eziphelele ukuze ungaphuthelwa yilutho.
1 Ukukhishwa kwe-Netflix: Meyi 2020
1.1 Uchungechunge oluboniswa kuqala
1.2 Amafilimu akhishwayo
1.3 Amadokhumentari akhishwayo
2 Ukukhishwa kwe-HBO: Meyi 2020
2.3 Okuqukethwe kwezingane - ama-HBO Kids premieres
3 Ukukhishwa kweDisney +: Meyi 2020
Ukukhishwa kwe-Netflix: Meyi 2020
Siqale ngokuqukethwe okwenze ukuthi iNetflix idume, uchungechunge, futhi kule nyanga kaMeyi iza nezindaba, kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo. Sizokuncoma IHollywood, uchungechunge olandisa ukuzidela kochungechunge lwabalingisi okwathi phakathi nawo-XNUMX bahlangabezana nobunzima obuhlukahlukene ekuthuthukiseni imisebenzi yabo edolobheni laseLos Angeles. Sithole uJim Parsons Njengomunye wabalingisi bayo futhi uyatholakala kusuka ngoMeyi 1 olandelayo, ngakho-ke ungazama.
I-Snowpiercer - Idethi ezonqunywa
Transformers: Cyberverse - Kusukela ngoMeyi 1
IColony - T3 kusukela ngomhlaka 2 Meyi
Omama Abasebenzayo - T4 kusuka ngoMeyi 6
I-Scissor Seven - S2 kusuka ngoMeyi 7
I-Eddy - Kusukela ngoMeyi 8
Okungenalutho - T2
Ufile Kimi - S2
Izindawo zokudlela e-Trouble - T2
Ababuyisi beRust Valley - T2
I-100 - T6 kusukela ngoMeyi 14
USh-Ra kanye neNkosazana Yamandla - S5 kusuka ngoMeyi 15
INdlovukazi yama-Indies kanye noMnqobi - Kusukela ngoMeyi 16
Lawula Z - Kusukela ngoMeyi 22
Ubukhosi - S3 kusuka ngoMeyi 23
ISpace Force - Kusukela ngoMeyi 31
Ukubheja kweNetflix kumamuvi kulenyanga yasentwasahlobo kaMashi 2020, okunye okulindelwe kakhulu ngumphakathi jikelele Ihhotela iTransylvania 3: Iholide Lezilo, ukuthi sizokwazi ukuyibona kusukela ngoMeyi 3 olandelayo. Asinawo ama-premieres amaningi wezinga elingaphezu komunye umkhiqizo wazo zonke izethameli, Njengezinja namakati, ukuthi ngalesi sikhathi kufika usuku lokuqala lukaMeyi. Kuzofanele sibheje ekukhishweni kwangaphambilini noma ku Iqembu Lokufa, itholakala kusuka ngoMeyi 7.
Njengamakati nezinja - Kusukela ngoMeyi 1
IKarate kid ii
Izilwane ezingenayo ikhola
UNks serial killer
Usuku lonke nobusuku obubodwa
Ihhotela iTransylvania 3: Iholide Le-Monster - Kusukela ngoMeyi 3
I-Death Squad - Kusukela ngoMeyi 7
Okunganqamuki uKimmy Schmidt: UKimmy vs. uMfundisi - Kusukela ngoMeyi 12
Enye iMissy - Kusukela ngoMeyi 13
Ngiyakuthanda, imbongolo - Kusuka ngoMeyi 15
Izinyoni zothando - Kusukela ngoMeyi 22
I-Hunch - Kusukela ngoMeyi 28
Amanothi we-heist movie - Kusukela ngoMeyi 1
UJerry Seinfeld: Amahora angama-23 okubulala - aqala ngoMeyi 5
I-Bon Voyage: I-Psychedelic Adventures - Kusukela ngoMeyi 11
Amacala abhekene nabezindaba
UHannah Gadsby: UDouglas - Kusukela ngoMeyi 26
Ukukhishwa kwe-HBO: Meyi 2020
I-HBO iphinde ilayishwe uchungechunge lwale nyanga kaMeyi, sizosebenzisa okubhaliselwe kunanini ngaphambili, ungasho. Amaphuzu avelele ikakhulukazi ingxenye yesibili yesizini yesine ye URick nodaka, uchungechunge lwezinto ezimbi ezihlubukayo ezinganconyelwe zonke izethameli kepha ezikwazi ukuthola ukuhleka okungaphezu kokukodwa kumuntu omdala kakhulu endlini. Futhi sinokuqukethwe kweSpanishi nge Votela uJuan evulwa ngosuku lokuqala lukaMeyi.
Votela uJuan - Kusukela ngoMeyi 1
URick noMorty - S4.2 kusuka ngoMeyi 4
UMnyango Wezikhathi - S4 kusuka ngoMeyi 6
Shwi No Mtekhala - Topic
Iqiniso Elingenakuphikwa - Kusukela ngoMeyi 11
Stargirl - Kusukela ngoMeyi 19
IDoom Patrol - S2 kusuka ngoMeyi 29
Sine-cinema ethile engathi sina Gravity, Indaba ekwazi ukukunika okukhasa esikhaleni, kudlala uSandra Bullock noGeorge Clooney okushiwo maduzane. Ingozi etholwe yilaba osomkhathi izokwenza uzizwe uthukile kakhulu, ikuvivinye. Kokubucayi kakhulu sinesaga Sharknado ngokugcwele, okushiwo maduzane. Futhi impumelelo ethile efana Top Gun o Ukufika kweSpiderman, kuphuma kuwe.
Amandla adonsela phansi - Kusukela ngoMeyi 1
Uthando nezinye izinto ezingenakwenzeka
I-Skate Kitchen - Kusukela ngoMeyi 2
I-snitch - Kusukela ngoMeyi 8
Ubusuku Obungalawuleki - Kusukela ngoMeyi 10
I-Sharnkado Saga - Kusukela ngoMeyi 22
Spiderman ukubuyela ekhaya
Ikhwaya - Kusukela ngoMeyi 29
Terminator - UGenesise
Okuqukethwe kwezingane - ama-HBO Kids premieres
I-Lego Scooby-Doo: Iphathi Yasebhishi - Kusukela ngoMeyi 1
UScooby-Doo neBatman Engesabi - Kusukela ngoMeyi 8
Umbukiso kaTom noJerry - S4
I-Lego Scooby-Doo: I-Haunted Hollywood - Kusukela ngoMeyi 15
I-Puss in Boots - Kusukela ngoMeyi 17
Shrek 3 - Kusukela ngoMeyi 17
UShrek: Ngokujabulisayo Ngemuva Kokulandela
Ukukhishwa kweDisney +: Meyi 2020
Ngokuqondene nama-movie, kubonakala ngokusobala I-Star Wars: Ukuphakama kweSkywalker, lokhu kwaqhutshelwa kusuku olulandelayo ngoMeyi 4. Isiqephu sesishiyagalolunye sale saga size nokugxekwa okuningi, kodwa kufanele usibone ukuze ukwazi ukuphawula ngaso. Kubuye kufike Maleficent: Inkosikazi Yokubi, ifilimu ka-Angelina Jolie lapho omubi eyi-protagonist futhi nomphumela uba muhle, indaba njengoba mhlawumbe bebengakutshelanga.
Phuma - Kusukela ngoMeyi 15
Umzuliswano owodwa - Kusukela ngoMeyi 22
IMandalorian - Isiqephu sesi-8 kusuka ngoMeyi 1
IClone Wars - Isiqephu 11 kusuka ngoMeyi 1
High School Musical: The Musical - The Series: Njalo ngoLwesihlanu
Siyethemba ukuthi zonke lezi zindaba zikusebenzele nokuthi ungaba nesikhathi esimnandi kusuka kusofa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Ukukhishwa ku-Netflix, HBO nakuDisney + ngoMeyi 2020